Dagaal Xoogan oo ka dhacay Gobolka Gedo |
Dagaal Xoogan oo ka dhacay Gobolka Gedo
Viagra Plus without prescription, purchase Zoloft. Dagaal Xoogan oo la isku Adeegsaday Hubka Nuucyadiisa kala duwan aya waxa uu Xalay ka dhacay Gobolka Gedo iyadoona Faah faahino dheeraad ah kasoo baxayan dagaalkaasi iyo Khasaaraha ka dhashay.
Dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey markii Dagaalamayaal Ka Tirsan Ururka Al Shabaab ay weerar Culus ku Ekeeyeen Fariisin Ciidanka Kenya ku leeyihiin Deegaanka Fax fax Dhuun ee Gobolka Gedo sidaana uu Dagaalka ku qarxay.
Saraakiil Ka Mid ah Al Shabaab oo La hadlay Warbaahintooda ayaa waxay sheegeen inay Guulo muhiim ah ka gaareen Dagaalkaasi islamarkaana hadafkii dagaalka kusoo guuleysteen.
Shabaab ayaa sheegay inay dileen Askar badan oo Kenyaan ahaa iyaguna dhinacooda khasaaraha Soo gaaray ma aysan Soo bandhigin inta uu la eg yahay.
Ciidamada Kenya ayaana la ogeyn khasaaraha dagaalkaasi kasoo gaaray waxaana warar hordhac ah ay sheegayaan in dagaalka markii uu dhamaaday ay dabagal ku sameeyeen raggii soo weeraray dagaal kalena uu dib u qarxay walaw waxyeelada ka dhalatay aan la sheegin.